Culimadda Soomaaliyeed oo ka soo horjeestay Siyaasada qaran ee Jinsiga – STAR FM SOMALIA
Culimadda Soomaaliyeed oo ka soo horjeestay Siyaasada qaran ee Jinsiga
Culimadda Soomaaliyeed ayaa ka soo horjeestay Siyaasadda qaran ee Jinsiga, kaasoo bishii la soo dhaafay ay meel marisay Xukuumadda Soomaaliya, iyadoo qodobada ku jira sharcigan uu ka hor imaanayo Diinta Islaamka.
Kulan Culimadda Soomaaliyeed ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxay kaga hor-yimaadeen barnaamijka siyaasada qaran ee Jinsiga oo ay Wasaaradda Haweenka soo diyaarisay.
Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah Guddoomiyaha Hey’adda Culimadda Soomaaliyeed ayaa sheegay in barnaamijka siyaasadda qaran uu khilaafsan yahay shareecada Islaamka.
“Waxyaabaha buuggaas ku jira waxaa ka mid ah in dhamaan Guddiinga gabdhaha la diidaa oo xataa gudniinka Sunniga ku jiro, oo ah in dambi laga dhigo, ma ahan arrin diinta islaamka ay qabto, sidoo kale da’da carrruurta ku qaan-gaaraan waxaa laga dhigay sida Gaalada oo kale 18-sano, waxaa la dhahay Gabadhu iyadaa is-guurin karto, iyadoo aabe iyo sheikh loo baahneyn”ayuu yiri Sheekh Bashiir Axmed Salaad.
Sheekh Bashiir ayaa sheegay in aanay sax aheyn in Soomaaliya lagu qasbo waxyaabo khilaafsan shareecada islaamka, waxaana uu ka digay siminaarada loo qabanayo haweenka ee lagu dhiira gelinayo, looguna sheegayo awood aanay laheyn.
“Haweenka kaalin weyn ayay bulshada kaga jiraan, waa in laga kaalmeeyo xaga aqoonta, sida waxbarashada, caafimaadka, baahida dumarka ma ahan Siyaasad, waayo waxay ku dayacan yihiin xaga carrruuta, waa in laga kaalmeeyaa, waana in lagu ixtiraamaa”ayuu yiri Sheekh Bashiir Axmed Salaad.
Guuxan ka soo yeeray Culimada Soomaaliyeed ayaa durbaba waxaa uu dhaliyay carro aad u weyn, kadib markii laga war helay in barnaamijka siyaasada qaran ee Jinsiga ay ku jiraan qodobo ka hor imaanaya Shareecada islaamka.